အီတလီနိုင်ငံရဲ့အကောင်းဆုံးယောဂခရီးဆုံးများအာလုံးရန် Ultimate လမ်းညွှန်
အားဖြင့် မမိရိအံ Cihodariu
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ တစ်ဦးအားလပ်ရက်ခရီးလမ်းဆုံးအဖြစ်အီတလီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုမှာသင်ရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့ရေပုံးစာရင်းပယ်ခြစ်ရာတစ်ခုခုမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ. သငျသညျအထပျထအီတလီနိုင်ငံမှပြန်လာနှင့်နေဆဲဒီပါမြေ၏လုံလောက်စွာနှင့်၎င်း၏အရသာကိုပုံမှန်အတိုင်းရှိသည်မဟုတ်နိုင်ပါတယ်, မဟုတ်…
ရထား Travel အီတလီ
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ အစားအစာကအရမ်းဘုန်းကြီးတယ်, အထူးသဖြင့်အရသာအစားအစာ. ဥရောပတှငျနထေိုငျသငျသညျကဤမျှလောက်အကြောင်းပြချက်ပေးသည်တဲ့အခါမှာဒါဟာနှင့်အတူစွဲလမ်းခံရဖို့ဒါလွယ်ကူပါတယ်! အစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများဥရောပ၌ရှိကြ၏, ငါတို့ကဲ့သို့ကောင်းစွာအစားကောင်းကြိုက်သူများများမှာကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချ, ထိုနည်းတူ၊…
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားဒိန်းမတ်, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားစပိန်, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ဤမျှလောက်များစွာသောမြင့်မားသောပရိုဖိုင်းနှင့်အတူ, ပြင်သစ်နဲ့တူခေတ်စားလာနိုင်ငံများ, ဂျာမနီ, နှင့်ဆွစ်ဇာလန်, သြစတြီးယားအများကြီးအာရုံစိုက်မှုအဖြစ်လာပြီရသေးအံ့ဩစရာမရှိ! ရလား, အီတလီနိုင်ငံကယ့်ကိုမြေပုံကျွတ်လေ၏ဘယ်တော့မှ, ဒါပေမယ့်သြစတြီးယားကနေအီတလီကိုရထားလမ်းကြောင်းသေချာလျစ်လျူရှုထားပြီး. ဒါပေမဲ့, ကြောင်းအကြောင်းဖွင့်…
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထား Travel အီတလီ, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ကိုယ့်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ, သငျသညျတောက်ပနှင့် sparkly နိုင်ငံအသစ်များများစွာသောလူရှာဖွေစူးစမ်းနိုင်ပါသည်. ဒါပေမဲ့, အဲဒီမှာရရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကဘာလဲ. ဥရောပတိုက်တွင်ဘတ်စ်ကားနှိုင်းယှဉ်မီးရထားခရီးသွားလာသည့်အခါ? ဤဆောင်းပါးသည်ရထားခရီးသွားခြင်းအကြောင်းကိုပညာပေးရန်ရေးသားခဲ့ပြီးရေးသားခဲ့သည်…
အားဖြင့် Felicity Dawn
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ရထားယူပြီးခေတ်မီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအရှိဆုံး underrated ပုံစံများကိုတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်. Intercontinental လေယာဉ်ပျံစီးနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပိုပြီးတတ်နိုင်ဖြစ်လာအဖြစ်, ဒါပေမဲ့ရထားနေရာတိုင်းမြင့်တက်များမှာ. ရထားခရီးသွားလာရန်အရှိဆုံးစိတ်ဝင်စားဖွယ်နည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုသည်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်…
ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ နယူးမြန်နှုန်းမြင့်, နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရထားကမ္ဘာတစ်လွှားလိုင်းများဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုဆက်လက်. ထို့အပွငျ, သူတို့နီးပါးအမြဲနှစ်သိမ့်ရည်မှတ်လေကြောင်းခရီးသွားရိုက်နှက်, အမြတ်အစွန်း, နှင့်ခရီးသွားများ၏မြန်နှုန်း. ဤအချက်မှာ, ကမ္ဘာတဝှမ်းပိုပိုပြီးရထားကွန်ရက်များရှိပါတယ်! နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရထားသို့သူလူတိုင်း…
ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားစပိန်, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ...
ပါရီရန်လန်ဒန် 2:20 Eurostar ရထားဖြင့်နာရီ
အားဖြင့် Carissa Rawson
စာဖတ်ချိန်: 10 မိနစ်များ လန်ဒန်နှင့်ပဲရစ်အကြားခရီးသွားလာရန်အအသုံးအများဆုံးနဲ့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတွေတ Eurostar မှတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်, နှစ်ခုမြို့တော်ဆက်သွယ်ထားသောမြန်နှုန်းမြင့်ရထား. အဆိုပါ-hop အောင်ရှာဖွေနေခရီးသွားများအတွက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်ရှိပါတယ်နေစဉ်, အဆိုပါ Eurostar ၏တ ဦး တည်းနေဆဲဖြစ်သည်…
ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ သငျသညျဥရောပတှငျနထေိုငျနှငျ့သငျနှမြောဖို့တနင်္ဂနွေရရှိပါသည် အကယ်. (ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုလုံးကိုရက်သတ္တပတ်!), ပွောဆို “ဟုတ်ကဲ့” ရထားလမ်းမှတဆင့်ဗာတီကန်စီးတီးလာရောက်လည်ပတ်ရန်နှင့်အပြည့်အဝမြန်နှုန်းမှာပျော်မွေ့! ဤဆောင်းပါးသည်ရထားခရီးသွားခြင်းအကြောင်းကိုပညာပေးရန်ရေးသားခဲ့ပြီး Save မှရေးသားခဲ့သည်…
ရထား Travel အီတလီ, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ဥရောပအနုပညာနှင့်ပြည့်ဝ၏, သမိုင်း, နှင့်ယဉ်ကျေးမှု. အံ့သြစရာမရှိပါကြောင့်လည်းအကောင်းဆုံးနေဝင်ဆည်းဆာမှအိမ်ပြန်ကြောင်းထို့နောက်ရှိပါတယ်. ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားနှင့်အတူ, ရထားစီးနင်းအားလုံးခရီးအကြောင်း, မဟုတ်အမြဲတမ်းလိုရာခရီး. ဒါကြောင့်, ပြန်ထိုင်ပြီးအနားယူပါ…
ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ဥရောပတစ်ဝှမ်းခရီးသွားထက်သင့်ရဲ့နွေရာသီသုံးဖြုန်းဖို့ဘာပိုကောင်းလမ်း, မှန်သော? မှန်သော. သင်ကအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဥရောပမြို့တော်အချို့ကိုကြည့်ရှုရန်ဘဏ်ကိုချိုးဖျက်ဖို့မလိုပါ; ယုံချင်ယုံမယုံချင်နေ, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောဥရောပခရီးသွားများ၏အရေးပါရှုထောင့်တစ်ဦးရွေးချယ်ရာတွင်ဖြစ်ပါတယ်…
10 ဥရောပရှိ Epic Surf Destinations အများစု